Ukukhusela uMkhuseli, Isixhobo esiKhuselayo sokukhusela, uKhuselo loKhuseleko - Thor
Intonga yombane yinto enye yenkqubo yokukhusela umbane. Intonga yombane ifuna uqhagamshelo emhlabeni ukwenza umsebenzi wokukhusela.
Sigxile kuphela kwimveliso, i-R & D, uyilo kunye nentengiso ye-SPDs.
Nika iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM
Khetha kwaye uqwalasele i-SPD echanekileyo yokuKhusela izixhobo zakho kuMbane wokuKhanya.
Intshayelelo yeMveliso TRS-B ...
Intshayelelo yeMveliso TRS-C ...
Intshayelelo yeMveliso TRS-D ...
Intshayelelo yeMveliso TRS9 ...
Ukwaziswa kwemveliso THOR ...
TRSS-DB9 Uthotho Port Signal Yenyuka Arrester Prot ...
Ukwaziswa kwemveliso ...
Idityaniswe kwi2006, Imbuyekezo Thor Electric Co., Ltd. Yakhele yonke into ukubonelela ngoluhlu olubanzi lwezisombululo ezikhuselekileyo nezithembekileyo zokukhusela kunye neemveliso.